सक्दो सेयर गरौं !! दुखद खबर चितवनमा एनसेलको टावरमा आगजनी, – Nepali Update
सक्दो सेयर गरौं !! दुखद खबर चितवनमा एनसेलको टावरमा आगजनी,
चितवन ,चितवनको कालिका नगरपालिका-९ मिलन बजारमा रहेको एनसेलको टावरमा मंगलबार साँझ आ’गजनी गरिएको छ । आ’गलागीको घ’टना थाहा पाउने वित्तिकै जुटपानी प्रहरी चौंकीबाट प्रहरीहरु प’रिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता एकनारायण कोइरालाले जानकारी दिए ।आ’गो कसले र किन लगायो भन्ने बारेमा केही खुल्न नसकेको कोइरालाले बताए । त्यस्तै चितवनमा विद्युत नबुझाउनेहरुको नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले लाइन का’ट्ने कामलाई ती’व्रता दिएको छ ।
साउनदेखि पुस १० गतेको अवधिमा ११ सय ७४ ग्राहकको लाइन का’टिएको छ । लाइन का’टिएकाहरुको कुल बक्यौता २ करोड ४ लाख १७ हजार ५ सय ७३ छ । तीमध्ये ८ सय १४ वटा लाइन रकम ति’रेपछि पुनः जडान गरिएको छ ।उनीहरुसँग १ करोड ३७ लाख ७३ हजार रकम असुल गरिएको विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख सुरेश महतोले जानकारी दिए ।प्राधिकरणले ५ ग्राहकलाई का’लोसूचीमा राखेको छ । का’लोसूचीमा पर्नेमा कुखुरा फा’र्म र व्यक्तिगत घरका धनीहरु छन् । उनीहरुबाट ७ लाख ८४ लाख १ सय १८ रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ ।
का’लोसूचीमा राखेकाहरुको विद्युत मिटर नै ज’फत गरेर ल्याइएको केन्द्रका प्रमुख महतोले बताए । विद्युत जो’ड्ने तर रकम न’तिर्ने प्रवृतिलाई नि’रुत्साहित गर्न स’चेतनासँगै का’रर्वाही पनि अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । यसलाई अझै ब’ढाउँदै लैजाने केन्द्रका प्रमुख महतोले बताए ।